လွယ်ကူသက်သာနည်းလမ်းရှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လွယ်ကူသက်သာနည်းလမ်းရှာ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Feb 20, 2012 in Creative Writing | 36 comments
ဒီတခါတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလေးတွေအကြောင်း ရေးချင်လို့ပါ။ သိတဲ့သူများလဲရှိမှာဖြစ်သ လို မသိတဲ့သူများအတွက်လဲ တန်ဖိုးမနဲစေတာမို့ ဒီပိုစ့် ကလေးကိုရေုးလိုက်တာပါ။ ကျွန်မတုံးကတော့ဒီနည်း တွေမသိခင်တော်တော်ခက်ခဲခဲ့ရပါတယ်။ သိသွားတော့လဲအမြဲအသုံးဝင်နေတာမို့ ဝေငှချင်စိတ်ပေါက်လာ လို့ရေး လိုက်တာပါ။ ဒီထဲမှာမပါတဲ့နည်းတွေရှိလို့ သိတဲ့သူများရှိရင်လဲမန့်တဲ့ထဲမှာ ရေးပေးလို့ရပါတယ်။ အိမ် သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့မို့လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်း လွယ်တကူလုပ်လို့ရသလို မှတ်မိလဲလွယ်ပါတယ်။ နည်းလေးတွေက တော့
၁။ မိမိအိမ်က whiteboard တွေ စွန်းထင်းညစ်ပတ်နေတာတို့၊ permanent marker နဲ့မှားရေးမိပြီး ဖျက်မရ ဖြစ်နေတာတို့ဆိုရင် သွားတိုက်ဆေးကို အ၀တ်ထဲညှစ် ထဲ့ပြီး ဖိပွတ်ပေး၊ ပြီးရင်ရေလေးနဲ့ပြန်တိုက်လိုက် ရင် whiteboard တွေဖြူဖွေးသွားစေပါတယ်။
၂။ ခေါင်းလျှော်ရည်ပုလင်းတွေကုန်သွားလို့ ပြန်သုံးချင်တယ်၊ အနံ့ကလဲမပျောက်ဘူးဆိုရင် ပုလင်းထဲကိုရေ အပြည့်ထည့်၊ ဆားလေးထည့်ပြီး တညလောက်စိမ် ထားလိုက်ရင် ဘာနံ့မှမကျန်တော့ပါဘူး။
၃။ ထို့အတူပဲ ငါးပိရည်နံ့၊ သားငါးညှီနံ့ စတဲ့အနံ့ဆိုးများလက်မှာစွဲနေရင် လက်ကိုရေစွတ်ပြီး ဆားအနဲငယ် လက်ဖ၀ါးထဲထည့်ပွတ်ပြီးရေဆေးချလိုက်ရင် အနံ့ဆိုးအား လုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ မီးဖိုချောင်ထဲက စတီးဘေစင်တွေအရောင်မလက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ မုန့်ဖုတ်တဲ့ဘေကင်ပေါင်ဒါ နဲနဲနဲ့ ပွတ်တိုင်ပေးရင်ပြောင်လက်သွားစေပါတယ်။
၅။ စိန်ထည်များကို အရောင်လက်စေလိုလျှင် သွားတိုက်တံပေါ်တွင်သွားတိုက်ဆေးထည့်ပြီး စိန်ပွင့်များပေါ် တွင်ပွတ်တိုက်ပေးပါက အရောင်များလှပစွာဖြာ ထွက်လာပါလိမ့်မည်။
၆။ အိမ်တွင်အလှအိုး ( သို့ ) ဘုရားအိုးများတွင် ကာနေးရှင်းပန်းများထိုးပါက အိုးထဲသို့ရေ လက်သုံးလုံးခန့် ထည့်ပြီးသကြားအနဲငယ်ထည့်ပါက ပန်းများလှပစွာ အစွမ်းကုန်ပွင့်လန်းပါလိမ့်မည်။
၇။ တခါတရံ လက်တွေကြမ်းတမ်းနေမယ်ဆိုရင် လက်ကိုရေစွတ်ပြီးသကြားလေးနဲနဲထည့်ပွတ် ရေဆေးချ လိုက်မယ်ဆိုရင် နူးညံ့တဲ့လက်ကလေးကိုရရှိပြီပေါ့။
၈။ ဆံပင်သားတွေပျက်စီးကြမ်းတမ်းနေပါလျှင် ညအိပ်ခါနီးတွင် ခွက်တခုထဲတွင် သံပုရာသီးတစိတ်ညှစ် ထည့်ပြီး ရေနွေးနွေးလေးကို ဆံပင်ရှည်ပေါ်ကြည့်ပြီး လိုအပ်သလောက်ထည့်၊ ပြီးလျှင်ဆံပင်ကိုဦးရည်ပြား မထိစေပဲ ဆံပင်ပေါ်တွင်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ မနက်နိုးလာလျှင် ခေါင်းလျှော်ပေး ခြင်းဖြင့် နူးညံအိထွေးသော ဆံပင်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၉။ စီးကရက်အနံ့တွေနဲ့ အနံ့ဆိုးတွေကို ပျောက်ကွယ်သွားစေတဲ့နည်းလမ်းကတော့ ဖယောင်းတိုင်တတိုင် ထွန်းပေးရုံနဲ့ အနံ့ဆိုးတွေ ယင်ကောင်တွေကိုဖယ် ရှားပေးမှာပါ။ မီးဖိုထဲမှာ ညှော်နံ့တွေ၊ တူးနံ့တွေရှိရင်လဲ ဒီနည်းလေးသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
၁၀။ အမှိုက်ပုံးတွေအနံ့ပျောက်ချင်ရင်တော့ အမှိုက်ပုံးထဲကို သံပုရာခွံပါးပါးလှီးထည့်ပြီးခဏ အဖုံးပိတ်ထား ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ဖန်ခွက်များကိုကြည်လင်တောက်ပစေလိုလျှင် ရေထဲကိုပြာဖျော်ထည့်ပြီး ဆေးကြောပေးပါကကြည် လင်ဝင်းပသောဖန်ခွက်များကိုရရှိမှာပါ။
၁၂။ မှန်များကိုကြည်လင်တောက်ပစေလိုလျှင် ရေ ၉ ဆ၊ ရှာလကာရည် ၁ ဆ ရောဖျော်ပြီး အ၀တ်စဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးပါက ကြည်လင်တောက်ပသောမှန်များကိုရရှိ ပါမည်။
thel nu aye,..ရေ
၅။ကွမ်းသွေးစွန်းလျှင်-လူနို့ ဆွတ်ပေး-နို့ ခြောက်လျှင်အစွန်းပြောက်သည်။
ကျေးဇူးပါအစ်မရေ။ ဒါတွေလဲမသိသေးဘူး။ မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်။
၅။ကွမ်းသွေးစွန်းလျှင်-လူနို့ ဆွတ်ပေး-နို့ ခြောက်လျှင်အစွန်းပြောက်သည်။ နည်းက လူနို့ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့လို လူပျိုလေးတွေက ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ဟင်။ အစ်မကြီးနောက်နေတာလား.
သတင်းစာထဲထည့်။ လူနို့ဝယ်လိုသည်။ မြင်ယောင်သေးတယ် ဟီဟိ။ ဟားဟားဟား။
အန်တီနို့နည်းနည်းလောက်။ ပါးမရိုက်ရင် ကံကောင်း၊ တော်ပြီအဲဒီနည်းမစမ်းတော့ဘူး။
သများလည်း သများသိတာလေးတွေ ပြန်မျှပါရစေချင့်…။
၉။ ပါးစပ်တွင် နွားနို့စိမ်းနံ့ ပျောက်လိုပါက ..ကြက်သွန်အနည်းငယ် ကောက်ဝါးလိုက်ပါ…
၁၀။ ဗိုက်ဆာလျှင် တခုခုစားပါ … ။ ဗိုက်အဆာပျောက်သွားကြောင်း အံ့သြဖွယ် တွေ့ရှိရပေလိမ့်မည်..။
၁၀ ကိုမှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်ခညာ့။ ပြီးလျှင်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပါမည်ခညာ့။
book mark လုပ်ထားပါသည် ။
ကိုယ်တိုင်ကော စမ်းကြည့် ပြီးပြီလားမေးချင်ပါသည် ။။ ကိုယ်တိုင်စမ်းရမှာ ပျင်းလို့ .. :grin:
ဟုတ် ကိုယ်တွေ့တွေပါ။ သဘောကျလို့ပြန်မျှလိုက်တာပါ။
ရေခဲသေတ္တာ အနံဆိုး ထွက်နေရင် မီးသွေးတုံးတွေ အိတ်နဲ့ ထည့်ထားပေးပါ။ တခါထည့်ပြီးသား ကို ၁ပတ်ထက်တော့ ပို မထားသင့်ဘူး။ သိပ်ကြာသွားရင် သူလည်း တာဝန် မယူနိုင်တော့ဘူး။
လွယ်ကူအသုံးတဲ့နည်းလေးတွေတင်ပေးတဲ့..ဦးThel Nu Aye နဲ့ ဦးaye.kk တို့ကိုကျေးဇူးပါချင့်..
ဟိုမင်းသမီးလေး ခေးမွေးထားတယ်မလားချင့် ….
သူ့သွားညှစ် ..အဲ့လေ. .သွားတောင်းပါလား ..
အချိုမှုန့်အသုံးဝင်ပုံလေးပြောပြအုန်းမယ် … တစ်ရက် အကျီအဖြူအကောင်းစားအသစ်ကိုဝတ်ပြီး ဆီတွေစွန်းသွားမိတယ် … အိမ်ရောက်ရောက်ခြင်း သနပ်ခါးခဲကိုသွေးပြီးလိမ်းထားပြီးမှ လျှော်မလို့စိတ်ကူးလိုက်တာ သနပ်ခါးခဲက အ၀ါတွေပါ စွန်းထင်းသွားပြီး ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ … ဆပ်ပြာမှုန့် ဆက်ပြာခဲတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှလုပ်မရတဲ့အဆုံး အချိုမှုန့်ကို အရောင်စွန်းနေတဲ့အပေါ်မှာဖြူးပြီး လက်နဲ့ပွတ်တိုက်လိုက်တာ အံ့သြဖွယ်ရာ အ၀ါရောင်တွေ အားလုံးပြောင်သွားပါကြောင်း … အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ အချိုမှုန့်ပါပဲ ….
တစ်ခုက မီးပူ အ၀တ်ကပ်သွားရင် ဆားနဲ့ ပွတ်ရင် ပျောက်ပါတယ်
ရုပ်ဆိုးနေလို့ နဲနဲလောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လှလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိသူများပြောပေးကြပါ
သည်မှာ ဦးနိုတယောက် လှချင်တော်မူနေလေရဲ့ …
တထုထုတော့ တထုထုဘဲ …လာတူးလှည့်ပါဦးဗျို့ ….
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကျော် …အဲ့လေ ဘုန်းနိုင် ကတော့
ပြောသား …လှချင်တာ …ဘာအတွက် ဆိုလား ..
မလှတဲ့ရုပ်ကိုဖယ်လိုက်ပါ။ လှတဲ့ရုပ်နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါ။ အံ့သြဖွယ်လှပလာပါ့လိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပါအမဝေေ၀နဲ့ nozomi ခည့ာ။ မသိသေးတာလေးတွေမို့မှတ်ထားပါမယ်ခည့ာ။
ဆိုးနေတဲ့ နေရာကို သံဘရပ်ခ်ျနဲ့များများတိုက်ပေးပါ
အပြင်သွားရင် ကိုယ့်ထက်ချောတဲ့သူတွေနဲ့မသွားနဲ့ ရုပ်ဆိုးတဲ့သူရွေးပေါင်း
ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချောဆုံးလို့ ထင်လာလိမ့်မယ်
ဟုတ်လား ညီလေးဇိ. ..
အတော်ဘဲ …လာကွာ လက်ဖက်ရည်သွားသောက်ရအောင် …
နာ တိုက်ပါ့မယ်ကွ …
ဘုရားပန်းအိုး (ကြေး) များကို မန်ကျည်းသီးဖြင့် ပွတ်တိုက်ပါက ပြောင်လက်သွားသည်ဟု ကြားဖူးပါသည်ချင့် …
အဲဒါ ဟုတ်ပါသလားချင့် …
အုတ်နီခဲမှုန့် နဲ့တိုက်ရင်လဲ ပြောင်တယ်..အေ့
ပုံမှန်မတိုက်တဲ့(ကြေး) များ ကိုတော့မန်ကျီးသီးမနိုင်ပါ။ ဘရာဇိုပါမှရပါသည်။
ဘရာဇို ဆိုတာ ဘာတုန်းဂျ ..
အဟီး … ပိန်းတာက အဲလောက်တောင်ပါဆို …
ကြောကျနော် … ဂယ်မသိလို့ မေးတာ …
ဘရာဇို ဆိုတာ Brazo ဆိုလားပဲ
အားနေနှာဘူးထဖို့ ပဲ သိနေပြီးတော့ ပြောပြန်ရင်လဲ ဒေါ်စိန်ပေါက်လွန်ရာကျဦးမယ်
အနံ့ ဆိုးထဲမှာ ငံပြာရည်အနံ့ ကော ဆားနဲ့ ဆေးရင် ပျောက်လား
တစ်ခါတလေ ငါးဖယ်အစာသွပ်ဆွဲပြီး ငံပြာရည်နံ့နံတယ်လေ့
ငံပြာရည်နံ့လဲနိုင်ပါတယ်။ ငါးပိရည်၊ ငံပြာရည်အတူတူပါပဲ။
အမသဲနုအေးရေ သင်္ဘောဆေးစွန်းသွားတဲ့ ဂျင်းပင်န် ကိုဘယ်လိုအစွန်းချွတ်ရမလဲ သိရင်ပြောပေးပါအုံး။
ဓာတ်ဆီနဲ့စိမ်ချွတ်ကွဲ့ 
အဲဒါကတော့ အပေါ်က မဝေတို့ အမအေးတို့ပြောသလို ဟင်းချိုမှုန့်နဲ့ချွတ်ကြည့်ပါလား။ သင်္ဘောဆေးကလူမှာစွန်းရင်တော့ဓါတ်ဆီနဲ့ရပေမဲ့အ၀တ်တွေတော့မစမ်းဖူးလို့မသိဘူး။ လူမှာဆိုရင်တော့ဓါတ်ဆီနဲ့ကျွတ်တယ်။ စမ်းကြည့်ပါလား။
မသဲရေ ရေးမှတ်သွားပါကြောင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေပေးလို့ ကျေးဇူးပဲ သဲနုအေး နဲ့ မအေးရေ။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အကျီ င်္လေးတစ်ထည် မီးကျွမ်းသွားလို့ နှမျောတသ အကြိမ်ကြိမ်ရွတ်နေတာ၊ လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။